Erotique Massage • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Voninkazo Tanana efatra Nuru Slide Fantra pahasalamana
SALIS EROTIKA PARIS
Na mitady ny hanaitra ny filanao ara-nofo na ny haavon'ny fahasambarana feno hafaliana sy ny fahafinaretana tsy misy fepetra ianao, eto izahay hanolotra anao ny tolotra fanorana erotika tsara indrindra. Andramo fanorana erotika farafahakeliny indray mandeha, ary ho azonao ny tena dikany mahafinaritra amin'ny fahasalaman'ny lehilahyo, ary hiverina foana ianao. Ny masseuse tena za-draharaha, mahay ary mahavariana dia vonona hampifaly na dia ny mpanjifa be mpitady indrindra aza. SERVICE. Azonao atao ny mitsidika ireo mpanotra anay any aminay fanasitranana erotika salon na fikarakarana fitsidihana an-tariby mankany amin'ny hotely na trano onenananao. Na inona na inona safidy tianao, dia mampanantena fanandramana erotika tsy manam-paharoa izahay.
Ny Masseuse rehetra antsika dia voafantina manokana noho ny talentany, ny fahaizany, ny hatsarany voajanahary ary samy notahian'izy ireo tamina fijery tsara sy fianahana ara-nofo voajanahary.
PROGRAMA MASSAGE - MASOTRA EROTIKA
Ny fanorana erotika dia fomba tsara hahazoana hery ara-nofo, fialan-tsasatra ary koa fientanam-po sy fientanam-po. Rehefa mahazo ny otrao ianao, dia handefa any amin'ny tontolo fahafinaretana hafa miaraka amina fikasihana mahafinaritra avy amin'ny mpanotra anao amin'ny vatanao.
VATO HAMPIASA NY TANY
Ny teknikan'ny fanorana amin'ny vatana amin'ny vatana dia avy any Thailandy; hafahafa, mifono mistery ary manaitaitra foana, mitondra ny olona rehetra fahafinaretana marina sy fialan-tsasatra mamirapiratra sy mahery.
Tsy tombon-tsoa ho an'ny lehilahy ny fanorana amin'ny vatana, fa ny mpanotra antsika aza afaka manome izany fahafinaretana izany na dia amin'ny vehivavy aza, indrindra raha toa ka matetika no ampiasaina any Thailandy io teknika io fa tsy fady.
Ny Tantra dia momba ny fialan-tsasatra amin'ny vatana sy fanahy, ary momba ny fampiasana hery ara-nofo ara-nofo.
Mampiseho anao izany fa tsy fady izany fientanentanana izany. Ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa ny firaisana ho sakafo hariva na sakafo haingana - ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho haingana sy haingana, ary ny mpiara-miombon'antoka dia mamaha izany hatramin'ny hafiriana no haharetany sy ny isan'ny toerana hiovany ao anatin'ny fotoana fohy.
01.pitsaboana izany dia fitsaboana olon-dehibe, noho izany dia mila 18 taona na mihoatra ianao, fara fahakeliny, hamandrihana ny fanorana. Raha te hanao fotoana dia afaka mifampiresaka amin'ny Internet na mandefa mailaka.02.HOTEL MASSAGEManolotra fanorana erotika ao amin'ny hotely koa ianao.
Ny vidinay dia misy ny dia, koa tsy hisy tsy ampoizina rehefa mandoa ianao. Ity serivisy ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny trano fandraisam-bahiny any an-tanànan'i Paris
ary mitandrina tsara ny famandrihana rehetra izahay.
Afaka manendry fotoana avy aminay izahay:
10.00 - 01, Mon-Sun.
Amin'ireo fandaharana fanorana erotika rehetra dia miasa amin'ny ambaratonga maro izahay. Miasa amin'ny hozatra mba hamotsorana ny fihenjanana amin'ny vatana mba hahatonga anao hahatsapa ho mahazo aina amin'ny mpanotra anao, mba hanombohana ny fanjakana erotika kokoa. Fahafinaretana sy fahalalana ny vatana amin'ny alàlan'ny fikasihan-tanana malefaka sy malefaka, ny tanjaka dia mitombo ary mandroso amin'ny haavon'ny faritra erogenous amin'ny alàlan'ny teboka samihafa amin'ny fanentanana ny vatana sy ny reflexology momba ny taovam-pananahana.
Amin'ity fanorana ity dia hampitombo ny fahalalanao momba ny firaisana ara-nofo ianao ary hampivelatra ny fahaiza-mahatsapa sy ny fanentanana ara-batana sy ara-panahy. Azonay atao koa ny mamorona traikefa mahatalanjona sy ara-nofo eo amin'ny tsiambaratelo ao amin'ny efitranonao na trano tianao manokana raha tianao izany.
Ny fanorana amin'ny vatana amin'ny vatana dia ataon'ny mpanotra miboridana tanteraka na misy tady g miaraka amina menaka mafana mitete ao amin'ny vatany.
Manomboka eo, mandro amin'ny toe-tsaina tia erotika ianao izay mamela ny fifandraisana akaiky eo amin'izy roa. Ity foto-kevitra fanorana ity dia ahitana endrika sy teknika fanorana isan-karazany, izay mitanjaka sy mihaona akaiky ny vatan'ny sakaizany roa.
Noho izany, ny fanorana vatana amin'ny vatana no tena manentana, mahafinaritra ary mahasoa indrindra tsy ho anao ihany fa ho an'ireo mpanotra amin'ny fotoana iray ihany. Ny vokatra dia fanandramana tsy hay hadinoina ara-batana sy ara-maso
Mandritra ny fanorana Tantra dia ho tsapanao ny fiarahana mahatalanjona amin'ny vatan'ny vehivavy mihaja. Ny zazavavy dia hanaitra ny sainao amin'ny fikasihana maivana amin'ny tratrany mitanjaka, valahany, kibony, vodiny. Ny sela tsirairay amin'ny vatanao dia hoentina miraikitra, satria ny ampahany amin'ny fanorana dia ataon'ny kiho sy ny lohalika mba hahatratra ny tampon'ny fialan-tsasatra. Ny fanorana tantra dia toy ny dia mankany aminao, amin'ny alalanao ao anaty izao rehetra izao. Mandritra io dia io, ny fikasihana feno fitiavana sy mahatsiaro tena dia hanampy anao hifandray amin'ireo ampahany sy lafin-tenanao, izay mazàna tsy dia mahaliana. Hifandray amin'ny fahafahanao feno, ny toetranao, ny filanao ara-nofo, ny fahafinaretana ary ny fahafahanao ho faly ianao!
Mba hankafizana ny fampiononana ao amin'ny efitranonao, manolotra ny serivisy fanorana hotely izahay. Ny iray amin'ireo mpanotra anay dia hihaona aminao any mba hahafahanao mankafy fanorana ara-nofo nefa tsy mila mitsidika ny salon masokinay.
Ny vidinay dia misy ny dia, koa tsy hisy tsy ampoizina rehefa mandoa ianao. Tsy misy hotely eto afovoan-tanàna ihany io serivisy io.
Ho an'ny fiarovana, raha mijanona ao amin'ny hotely ianao, dia hisy fitsidihana fahalalam-pomba hatao amin'ny andro famandrihana mivantana amin'ny efitranonao.
Izany dia natao mba hiantohana ny fanendrena araka ny tokony ho izy ary ho fanamafisana ny teboka fihaonana.
Ara-dalàna tanteraka amintsika ny manaraka ity fomba fiasa matihanina ity, izay hiantoka ny filaminan'ny antoko rehetra voakasik'izany.
60 mn - 200 EURO90 mn - 250 EURO 120 minitra - 300 EURO
MITSANGATRA EO amin'ny HOTEL
60 mn - 250 EURO90 mn - 300 EURO 120 minitra - 350 EURO
Alatsinainy: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Talata: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Alarobia: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Alakamisy: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Zoma: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Asabotsy: 10: 00 AM - 11: 00 PM